Castle an'i Neuschwanstein, tranobe nofinofy | Vaovao momba ny dia
Any akaikin'ny sisintanin'i Aostralia, adiny iray sy sasany atsimo andrefan'ny tanànan'ny Munich any Munich ary akaikin'ny tanàna antitra mahafinaritra ao amin'ny tanànan'i Füssen no Tranon'i Neuschwanstein, iray amin'ireo tranobe manan-tantara malaza any Alemana ary iray amin'ireo toerana itodiana malaza any Alemanina ho an'ny fizahantany, manintona izay mahazo mpitsidika manakaiky ny iray tapitrisa sy sasany isan-taona.
Ity lapa malaza ity dia natsangana tamin'ny alàlan'ny Louis II an'ny Bavaria, fantatry ny maro amin'ny hoe 'mpanjaka adala', izay nitaona ny angano alemanina sy ireo sanganasa mahery fo tamin'izany fotoana izany dia nanapa-kevitra ny hanangana azy io amin'ny fotoana tsy nilazan'ny lapa sy trano mimanda tamin'ny fomba fijery miaro azy. Ity lapa ity dia aseho ho fananganana fomba Neo-Gothic sy Neo-Romanesque izay nitady hirindra amin'ny tontolo mahavariana misy azy, manamorona ny tendrombohitra sy ny farihy ao amin'io faritra io.
Neuschwanstein Castle dia miorina eo amin'ny tampon-kavoaran-tarehy izay manatrika ny Pöllat gorge, eo am-pototry ny Alpes Bavarian, ary mijoro akaikin'ny Lapan'i Hohenschwangau sy ny farihy Alpsee sy Schwan. Ny Castle Lookout dia manolotra fahitana mahatalanjona an'ny faritra, ao anatin'izany ny farihy, ny Hohenschwangau Castle ary ny Marienbrücke, ilay tetezana mijanona tariby ao amin'ny Pöllat Gorge.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » mpitarika » Castle Neuschwanstein, trano mimana nofinofy any atsimon'i Alemana
Toledo, tanàna mahavariana amin'ireo kolontsaina telo